Ityoophiyaan adeemsa hordoffii garee gamaaggama tumsa idila addunyaa (ICRG) darbuu ishee ibsame – Fana Broadcasting Corporate
Ityoophiyaan adeemsa hordoffii garee gamaaggama tumsa idila addunyaa (ICRG) darbuu ishee ibsame
Finfinnee, Onkololeessa 11, 2012 (FBC) – Ministiriin Nageenyaa Aadde Mufariyaat Kaamil waajjira isaanitti guyyaa har’aa ibsa gaazexeessitootaaf laataniin, Ityoophiyaan adeemsa hordoffii garee gamaaggama tumsa idila addunyaa (ICRG) darbuu ishee ibsaniiru.
Aadde Mufariyaat Kaamil ibsa kennaniin, Ityoophiyaatti maallaqaa fi qabeenyaa gocha yakkaa irraa argame, seeraa qabeessaa fakkeessanii dhiyyeessuu fi shoroorkeessummaa fi meeshaalee waraanaa gamtaan miidhuu danda’u sirna ittisuu fi to’achuu danda’u, sadarkaa olaanaan jijjiiruun kan danda’ame ta’uu, akka idila addunyaatti gamaaggamaa kan ta’e gareen humna faayinaansi (FATF) gamaaggamicha irratti Onkololeessa 7, 2012 murte dabarsuun beeksiseera jedhan.
Aadde Mufariyaat ibsa isaanitiin yakkoota maallaqaa gocha yakkaan argame yookiin qabeenyaa seeraqabeessa fakkeessanii dhiyyeessu (money laundering) fi shoroorkeessumaa maallaqaan deeggaruu (financing of Terrorism) ittisuu fi to’achuu ilaalchisee humna gocha faayinaansi (Financial Action Task force – FATF) kan jedhamu gareen gamaaggama idila addunyaa yaada marii 40 baasuun haala biyya yeroo yeroon ni gamaggama jedhameera.
Biyyi keenyi yaadota marii 40 FATF irratti hir’inni waan qabduuf maqaan ishee marsariitii FATF barreeffame turuu isaatiin investeroonni gara biyya keenyaatti galanii akka hin hojjenne , oomishni biyya keenyaa gara biyya alaatti ergamaan akka hin bitamne, hariiroon bankoonni biyya keenyaa biyyaa biro waliin qaban laafaa taasisuu, meeshaaleen abbootin qabeenya galchaniifi gara alaatti ergan amanamummaa akka dhabu tasiseera.
Garichi haala yeroo ammaa biyya keenyaa gamaaggamuun biyyi keenyi Ityoophiyaan adeemsa hordoffii garee gamaaggama tumsa idila addunyaa (ICRG) darbuu ishee ibsameera.
Aadde Mufariyaat rakkinoonni akka kanaa deebi’anii akka hin mudanneef sadarkaa idila addunyaanyaatti dhaabbilee faayinaasii garaagaraa kan of keessatti haammate garee biyyoolessaa hundeessuf hojjetamaa jiraachuun ibsaniiru.